जतिसुकै पटक संविधान आए पनि एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन, संविधान नजलाई हुँदैन, नेता नभुटी हुँदैन – SajhaPana
जतिसुकै पटक संविधान आए पनि एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन, संविधान नजलाई हुँदैन, नेता नभुटी हुँदैन
साझा पाना २०७५ असोज ३ गते ०६:३२ मा प्रकाशित
एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन नसकेजस्तै जति पटक जस्तो संविधान आए पनि पूरानै नेताहरुबाट केही पनि हुन सक्दैन, उमेर मात्र पूरानो होइन यितको विचार पनि पूरानै हो । नयाँ आएका पार्टीहरु पनि सबै पूरानै विचारका हुन् । यी सबैको विचार सांसद भएर मन्त्री /प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाललाई चाहिएको सांसदहरु मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हो ।
नेपाललाई चाहिएको जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउन पाउने, विदेशीले ढाल्न नसक्ने सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था सांसदको बहुमत होइन, जनताको मतदाताको जम्मा मत मध्ये ५१ मत पाउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था हो ।
पञ्चायत व्यवस्था गलत तर पञ्चायती व्यवस्थाकै व्यक्तिहरु लोकेन्द्र बहादृुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा सही भनेर यिनै कांग्रेस र एमालेले हामीलाई फेरि बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चको शासन भोगाएका हुन् । यिनै कांग्रेस एमाले पहिला पञ्चायतमा पनि शासक थिए अजुननरसिंहदेखि कम्युनिष्टका नेता राजपरिषद स्थायी समिति सभापतिसम्म ।
माओवादी आएपछि पनि हामीलाई यिनै बहुदलवादी र गणतन्त्रवादी नेताले कमल थापादेखि लोकमान ठीक हुन् भनेर यिनैले शासक बनाएर हाम्रा टाउकामाथि राखिदिए । त्यसैले पञ्चायतदेखिका अहिलेसम्मका सबै शासक एउटै हुन् । चाहे ती कांग्रेस एमाले माओवादी राजावादी मधेसवादी जो जो हुन् ।
त्यसैले हिजो राजाका समयदेखि कांग्रेस एमाले माओवादी सबैसँग मिलेर खाने राजेन्द्र महतो, जे पी गुप्ता, महन्थ ठाकुर सबैलाई सबैले दलले र व्यवस्थाले पालिरहेका थिए । आज पनि एमाले र माओवादी मिलेर राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेर निर्णयै गरेर जिताएका हुन्, राप्रपका महामन्त्री राजेन्द्र लिंगदेनलाई पनि एमाले र माओवादीले आफ्नै उम्मेद्वार सरह भोट हालेर निर्णय नै गरेर जिताएका हुन.् । महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले जिताएको हो ।
हृदयेशलाई कम्युनिष्टले जिताएको हो । प्रचण्डले हिजोअस्तिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा रुखमा भोट मागेको हालेको, देउवाले हिजो अस्ति मात्रै हो हसिया हथौडामा भोट हालेको । साझा विवेकशीलले कांग्रेलाई भोट हालेको राष्ट्रिय सभामा । अनि यिनीहरु सबैको के फरक फरक सिद्धान्त, नीति, विचार छ र ? यिनीहरु सबै जनताको ढाड सेकेर खाने एउटै सिद्धान्त भएका फरक फरक नामका एउटै पार्टी हुन् नेपालका हालसम्मका । नाममा नयाँ देखिए पनि नेपालका हालसम्मका सबै पार्टी पूरानै र एउटै नीतिका फरक फरक नामका त्यही सांसद खरिद बिक्री गर्ने, सांसदबाट मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने,जनताको बहुमतका नाममा जनताको होइन विदेशीको पैसाले खरिदबिक्री गरिएका सांसदको बहुमतबाट सरकार बनाउने ।
विदेशीले नै चाह्यो भने जनताको मतबाट होइन विदेशीकै इशारामा सांसदको भोटबाट सरकार ढलाउने, मह्रंगो चुनाव गराएर अप्राकृतिक मूल्यबृद्धि गराउने एउटै सिद्धान्तका पार्टीहरु हुन् । त्यसैले बहुमत छँदाछँदै पनि विदेशीको डरले सरकारलाई अmझै बढी सांसदहरुलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सामेल गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । अहिलेको सरकारलाई पनि त्यही भएको हो ।
जम्मामा, हालसम्मका सबै दल र नेताहरु निरंकुश हुन्, वास्तविक लोकतन्त्र विरोधी हुन् । यिनीहरु पञ्चायतकाल देखिकै नेता र दलहरु हुन् । त्यसैले संविधान पटक पटक हामीलाई षडयन्त्रमूलक ढंगले झुक्याएर परिबर्तन भए पनि नेता उनै रहिरहन्छन् । नेपालमा राजनीति भएकै छैन, जालझेल मात्र भएको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि तिनै निरंकुश शासनका पक्षधर नै अहिलेसम्म मन्त्री प्रधानमन्त्री छन् । यो देखिँदाको मात्र लोकतन्त्र हो । यो लेख पढिरहने तपार्इँ कतिले आफँैले हालेको भोटले यो देशको प्रमुख जन्मेदेखि अहिलेसम्म को कति पटक भयो ? तपार्इँको र तपार्इँको भोटले होइन, सांसदको भोटले मात्र सरकार चलाउने व्यक्ति छानिन्छ । सरकार बन्छ । तर सोझौ जनताको अर्थात् मतदातको जम्मा मत संख्याय ५१ प्रतिशत ल्याउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था हुने हो भने हरेक जनतालाई विदेशीले यसलाई भोट हाल्नुस् भन्न सक्छ ? सक्तैन त्यसैले विदेशी हस्तक्षेप चल्दैन । तर यी दल र नेताहरु त्यो व्यवस्था चाहँदैनन् किनकि यिनीहरु विदेशीका गुलाम हुन् । अब चाहने हो भने पनि यिनहरु पटक पटक नुहाइसकेका पानीहरु हुन् यिनैलाई प्रयोग गरेर नेपाली राजनीति र समाज शुद्ध हुन सक्तैन ।
नेपालका हालसम्मका सबै पार्टी फरक फरक नाम भएका एउटै पार्टी हो, सबैको सिद्धान्त व्यवस्था र संविधान परिवर्तन गरिरहने तर व्यक्ति चाहिँ आफूहरु नै सबै मिलेर शासन गरिरहने हो त्यसैले जतिसुकै पटक संविधान आए पनि एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन, संविधान नजलाई हुँदैन, नेता नभुटी हुँदैन तर भुट्ने भन्नाले विचारले भुट्ने हो । विचारले भनेर कुरा मात्र गर्ने होइन, कामले भुट्ने हो । आउनुस् हामी हातेमालो गरौँ धेरै दिन बाँकी छैन, यही असोज १६ देखि हामी मेचीमहाकाली अभियानमा छाँै ।
यो संविधानको अन्त्य गराँै, पूराना विचार र व्यक्तिहरुको होइन वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने नयाँ विचार र व्यक्तिहरु, जो एक पनि नुहाइसकेको पानी होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरुको नेतृत्व निर्माण गरौँ । तपार्इँ हामी वीचमै तपार्इँ र म नै त्यो नेतृत्व र अभियन्ता हौँ । हामीले हामीलाई नचिनेर हो । संसारमा एउटा मान्छेजस्तो शक्तिशाली केही र कोही छैन । हामीमा त्यो शक्ति छ । आउनुस् यो व्यवस्था अन्त्य गर्न लागाँै, जागौँ ।
यस्तो छ सुवास भट्टराईको गीत : सिमसिम झरीमा
कहरका बिच अस्ताएका सपना